Ndi Mmepe Soro n’ego ahia ahia gi? | Martech Zone
Tuesday, August 9, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Mgbe na-ede a amaghị na n'abalị a, M malitere na-eche banyere ụfọdụ n'ime ihe ịga nke ọma azum anyị na-etinye ọnụ maka ahịa… na ọtụtụ n'ime ha abụghị nanị banyere ahịa, ha bụ banyere ụlọ ngwá ọrụ ga-emekwa ndị ọrụ. Edeela m ihe banyere Stylesdị 3 nke mmụta tupu… mmadụ na-elegharakarị ya anya.
Kwunyere. Akụkụ dị ukwuu nke ndị na-ege gị ntị na-emeghachi omume na mmụta mmụta kinesthetic karịa mmụta anya ma ọ bụ nke nnabata. Have nwere ngwa ọrụ ma ọ bụ ngwa dị na saịtị gị nke na-enyere ha aka? Ọ bụrụ n ’imepụta ụdịrị ngwa ọrụ a, ị ga - ahụ nrịba ama akara na ọnụego nzaghachi sitere na saịtị gị. Lee ụfọdụ ihe atụ anyị mere:
Ihe Nchọta Ọnọdụ Onlinentanetị - ebumnuche nke nnụnnụ nnụnnụ na-enweghị oke n'ịntanetị bụ ịchụpụ ọtụtụ mmadụ ozugbo na aha ha. Yabụ - anyị mepụtara usoro ọnọdụ ụlọ ọrụ maka ha. Anyị nwekwara ya n'ụdị mkpanaka ma na-achọ ịhapụ ya dị ka ngwa Facebook!
Egwuregwu Fan Eserese - Pat Coyle na-agba ọsọ a egwuregwu ahịa gị n'ụlọnga ma choro iweta ngwa oru gha adọta ya ezubere iche ndị na-ege ntị market egwuregwu ahịa. Ya mere, anyị wuru Pat ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji mee ka stats dị na mgbasa ozi mgbasa ozi ha. Ma ọ rụpụtara!
Calgwọ culagwọ - CCRnow chọrọ ịnye ndị ọrụ ha na atụmanya ha ụzọ iji gbakọọ ozi ịkwụ ụgwọ n'ezie na ụgwọ kaadị akwụmụgwọ ha. Ọ bụrụ n’ịche na ọ bụ ngụkọta mmasị gbasara ihu na-aga n’ihu, ị hiere ụzọ! Ugbu a ngwá ọrụ na-enye onye ọrụ a ntụnyere nke otú ngwa ngwa ha nwere ike ịbụ nke ụgwọ na enyemaka CCRnow.
Echeghị m na otu n'ime ihe ngwọta ndị a nọ na nyocha mgbe ndị folks a malitere iche echiche banyere otu ha ga - esi nweta ihe inbound na - eduga n'ịntanetị… mana ngwa ọrụ ụlọ na - eme ndị na - ege ha ntị, debe ha na saịtị ahụ ogologo oge, ma mesịa mee ka atụmanya ndị ahụ nwee azụmaahịa soro ha. Onweghị otu n'ime ihe ngwọta ndị a dị oke ọnụ - amalitere niile n'okpuru $ 10k!
Nwere ike ịmalite bido iche maka saịtị gị nke ga - emepe nke ga - enyere ndị ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ aka iso gị rụ ọrụ karịa. Mgbe ụfọdụ ederede na vidiyo anaghị ezuru!
Etu esi eji Twitter